Archives ivelany - IntoKildare
Ny fahitana any Kildare dia zavatra jerena mandritra ny taona. Tsy misy tsy fahampiana ny fomba hivoahana sy hizaha ity makka feno natiora ity, koa mihadia ary zahao izay manome aingam-panahy anao!
Toerana misy ny faritra ambanivohitra tsara tarehy indrindra any Irlandy, Co. Kildare dia toeran-kaleha mahafinaritra ho an'ireo izay tia manararaotra ny tsara indrindra eny ivelany. Na tianao ny ala mandeha na fitsangantsanganana amoron-drano mahafinaritra, misy safidy betsaka ao Co. Kildare. Plus, ny misokatra lemaka an'ny The Curragh, ary tsy fahitana havoana kely, dia midika fa toerana tsara ho an'ny mpandeha an-tongotra sy bisikileta amin'ny sokajin-taona rehetra i Co. Kildare.